Ikhabhathi encinci yaseMtn, amagumbi ama-2 276 sq.ft. + Loft 122sq.ft
Hlala iintsuku ezi-3-14 kwiKhabhinethi yangasese ehlathini. IPHELELE ABA-2 kodwa baya kulala abantu aba-4, AKUKHO IZILWANYANA ZOKUXHUMANA! (2) TV's, Wifi, Heat/AC, toilet & shower ngaphakathi, kunye neshawari ngaphandle. Ileli ukuya kwigumbi eliphezulu lendawo yokulala. Isibane esiluncedo ngaphandle, (4) izibane zokhuseleko, indawo yomlilo. Ikhitshi inefriji encinci. 2 isitshisi sokupheka, imicrowave, iketile yamanzi ashushu ukwenzela ikofu, ioveni yetoaster. Iihektare ezingama-41 ukuhamba kwaye wonwabe. Iveranda egcweleyo ngaphambili! Imizuzu kuphela ukusuka edolophini nakwiivenkile.
Iyadi encinci ebiyelweyo ukuze abantwana badlale kuyo okanye bamise eyabo intente "yokumisa inkampu" kunye nokufumana amava apheleleyo angaphandle. Nangona i-loft yonyulwe indawo yokulala, ibhedi yesofa igoqa ukuya kwibhedi egcweleyo ukuze ungakhweli ileli ukuba awufuni ukwenza njalo. Kukho i-mattress pad ye-sofa, nceda uhlale ukhumbula, YI-SOFA BED kwaye AYIKHO ntofontofo njenge-pillowtop king sized bed yakho ekhaya. Ibhedi yokukhempisha iyafumaneka xa uyicela. I-Loft ine-banister yokhuseleko kodwa ayikhuthazwa kubantwana abancinci.
Le ndawo "iziva" ingasese kakhulu kodwa eneneni ukwiikhilomitha ezili-10 kuphela ukusuka eFlemingsburg kunye neekhilomitha ezili-16 kuphela ukusuka eMorehead (I-64) apho kukho iindawo ezintle zokutya, ivenkile kunye nokuhlola. Iinkuni ezijikelezileyo kunye nentaba zenza kube yindawo enkulu yokuhlola okanye ukumisa intente. I-Fleming County yi-CAPITAL YEBRIDGE E-COVERED kunye ne-Goddard/White Covered Bridge iphantsi kwendlela. Ekwindla xa amagqabi eqala ukujika imibala lelona xesha lilungileyo lendawo kunye nokuthatha imifanekiso.
Mna noEd okanye ilungu losapho sitsalela umnxeba nje kuphela. Abamelwane abakhulu ekupheleni kwendlela, bahlala bekulungele ukunceda.